Uganda iyo Midowga Afrika oo Isku khilaafsan Magta Askarta kaga Dhimata Soomaliya – Radio Daljir
Uganda iyo Midowga Afrika oo Isku khilaafsan Magta Askarta kaga Dhimata Soomaliya
Juunyo 3, 2015 2:19 b 0
Arbaco, Juun 03, 2015 (Daljir) — Madaxa Waaxda Ururka Midowga Afrika ugu qaabilsan Taageeridda Hawlgalladda Nabadda, Bam Sivuyille iyo Taliyayaasha Sarsare ee Ciiddanka Uganda ayaa arrinkaasi kaga tashaday Kulan ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee Kampala.
Hadal qoraal ah oo Ciiddanka Uganda ka soo baxay, kadib, markii uu kulankaasi soo idlaaday ayaa sheegay inay u gudbiyeen Ururka Midowga Afrika codsi ahaa in la kordhiyo Lacagaha Magta ee haatan la siiyo qoysaska ay Askarta kaga geeriyoodaan Hawlgalka AMISOM.
Qoraalka ayaa lagu muujiyey in ay Uganda codsatay in Kharajka Magta la gaarsiiyo 70,000 oo Dollar, halka ay haatan ka tahay 50,000 oo Dollar.
Dhinaca kale, Labada dhinac waxay ka wada hadleen Mushaaraadka Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah AMISOM oo la sheegay inuu had iyo jeer ka soo daaho, waxayna Ururka Midowga Afrika sheegeen inuusan Askarta Uganda keliya ka soo daahin mushaarka.
Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, oo tiradoodu dhan tahay 6,223 Askari, waxa uu midkiiba mushaar ahaan bishii u qaataa lacag dhan 2.4 million oo Uganda Shillings ah.
Waxaa kaloo jirta in Ciiddanka Uganda laga jaro bishiiba lacag dhan 200 Dollar oo ay Dowladda Uganda ku sheegtay in Ciiddanka Qaranka loogu dhisayo Isbitaal Casri ah, kaasi oo laga hirgelinayo Degmadda Mabuya.
Madaxweynaha Yemen oo sheegay in ay la Hadlayaan kooxaha Mucaaradka ku ah Dowladdisa